तपाईको छालाको सुन्दरता हराउँछ ? – Saurahaonline.com
तपाईको छालाको सुन्दरता हराउँछ ?
चितवन, ०१ असोज ।
सुन्दर रहनु हरेक मानिसको चाहाना हो । पुरुषभन्दा बढी महिलाहरु यसको लागी धेरै ध्यान दिने गर्छन् । महिलाहरु विभिन्न खालका मेकअप गर्ने गर्छन् । तर आफुलाई सुदर बनाउने धुनमा हामीबाट विभिन्न खालका गल्तिहरु हुने गर्छन् । जसले हाम्रो छालाको सुन्दरता घटाउने गर्छ । त्यसैले कस्ता कुराहरुले सुन्दरतामा असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा निकै ख्याल गर्नुपर्छ । पछि पछुताउनु भन्दा अगाडी नै ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
यस्ता कार्यहरुले छालाको सुन्दरता घटाउन मद्धत गर्छन् :
१) तातो पानीले धेरै बेर नुहाउनु : तातो पानीले धेरै बेर नुहायो भने छालामा हुने फ्याट्टी एसिड, सेरामाइड्सजस्ता तत्व नष्ट हुन्छ र यसले छालालाई रुखो, सुख्खा र फुस्रो बनाउँछ । त्यसैले तातो पानीले १० अथवा १५ मिनेटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन ।
२) सुगन्धित साबुनले नुहाउनु : साबुनले मुख धुनाले मुखमा भएको म्वइस्चराइजर कम हुन्छ र अनुहार फुस्रो बन्छ । जीउमा दल्न पनि तेलमिश्रित साबुन, बडीवास अथवा सुगन्ध नमिसाइएको साबनु छान्नुपर्छ ।
३) नुहाएपछि तौलियाले बेस्कन पुछ्नु : नुहाएपछि हामी कपाल र शरीरलाई तौलियाले बेस्कन पुछ्ने गर्छौं । यसो गर्दा छाला रगडिने, यसको म्वइस्चराइजर उड्ने गर्छ । नुहाएपछि जोडले कपाल पुछ्यो भने कपाल झर्ने गर्छ । त्यही भएर नुहाएपछि तौलियाले बिस्तारै पुछेर शरीरलाई ओभानो बनाउनुपर्छ ।
४) जाडोमा सन्सक्रिम नलगाउनु : जाडोमा घामले त्यति नपोल्ने भएकाले हामी गर्मीमा मात्र अनुहारमा सनस्क्रिन क्रिम लगाउने गर्छौं । तर, छालालाई हानि पूर्रयाउने विकिरण सूर्यले वर्षभरि नै फाल्ने भएकाले जाडोमा सनस्क्रिन क्रिम लगाइएन भने अनुहार, घाँटी, गर्धन र हातको छाला बिग्रिन सक्छ ।